Maxay ka wada hadleen Muuse Biixi iyo Dubmlamaasiyiinta Caalamka ee dalka ku sugani?
Home WARARKA Maxay ka wada hadleen Muuse Biixi iyo Dubmlamaasiyiinta Caalamka ee dalka ku...
Hargeysa(Berberanews):- Guddoomiyaha Kulmiye ahna Murrashaxa Madaxweynaha Xisbigaas Muuse Biixi Cabdi, ayaa kulan la qaatay Xubno Safirro iyo Diblomaasiyiin isugu jira oo ka socda Midowga Reer Yurub iyo waddamo kale oo Qaaradda Yurub ku yaalla, kuwaas oo Somaliland u yimi doorashadii madaxtooyada ee ka qabsoontay dalka Isniintii shalay.
Sidaa waxa lagu sheegay War Qoraal ah oo Xafiiska Warbaahinta u qaabbilsan Xisbiga Kulmiye ka soo baxay Maqribkii caawa, kaas oo Nuqul ka mid ahi soo gaadhay Berberanews.com, waxa Qoraalkiisu u dhignaa sidatan:-
“Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo ay wehelinayaan saraakiil xisbiga ka tirsan oo ay ka mid yihiin Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE Md. Axmed Cabdi Dheere, Prof. Axmed Ismaaciil Samatar, aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo xubno kale, ayaa kulankan oo ka qabsoomay Hutel Ambassador ee magaalada Hargeysa maanta waxa uu la qaatay xubno safiirro iyo diblomaasiyiin isugu jirta oo ka socota dalalka Norway , Sweden, Belgium, Switzerland, Netherland, UK, Denmark, Finland iyo xafiiska Midowga Yurub.
Waxaanay dhinacyadu kulankooda diirrada ku saareen arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dhawridda ama sugidda natiijada doorashada madaxtinimada dalka ka qabsoontay, aqballaadda natiijada la wada filayo iyo sidii loo bogaadin lahaa hannaankii anshaxa iyo ixtiraamku ku gedaanaa ee ay bulshada reer Somaliland u gashay doorashadii shalay dalka ka qabsoontay.
Diblomaasiyiinta iyo safiirrada, ayaa iyaguna dhinacooda si waafi ah murrashax uga mahadceliyey sida uu diyaarka ugu yahay inuu dhinaciisa ka dhawro deggenaanshiyaha wadajirka bulshada reer Somailand, siina ambo-qaado horumarka dhinaca dimuqraaddiyadda ah ee Somaliland tusaalaha tolmoon ugu tahay dalalka ku yaalla qaaradda Afrika iyo waddamo badan oo dunida kamid ah.” Sidaa ayaa lagu yidhi Warka Qoraalka ah ee Xisbiga Kulmiye naga soo gaadhay.
Previous articleWiilkeyga nolol iyo geeri kuma hayo bil ka dib qarixii Soobe
Next articleSomaliland vote: Young people decry clan politics